UbuntuStudio uye Edubuntu: Vaviri vatorwa | Kubva kuLinux
UbuntuStudio uye Edubuntu: Vaviri vatorwa
Kana uchitaura nezve zvinonaka zve Ubuntu zvinogara zvichitaurwa Kubuntu, Xubuntu y Lubuntu, uye zvimwe zvakasiyana zvinoita basa rakakosha mukati meMunharaunda uye izvo zvinofanirwa kutaurwa zviri kukanganikwa ndoreva UbuntuStudio y Edubuntu.
Panguva ino ini ndichatarisa pa UbuntuStudio zvakanaka mune iyo kesi ye Edubuntu Ndine zvangu maonero nezvekuti zvinoshanda sei. Ndiri kureva, zvinoratidzika kwandiri kuti Kubatana haisiyo yakakodzera Desktop Nzvimbo yekugovera iyo inofanirwa kuve yakanangana nedzidzo.
Kutanga, nekuti mashandisiro ayo haasi enzwisisike. Hazvisi nyore kuziva kuti ndeapi maturusi atinofanira "kuzvidzidzisa", uye chechipiri, nekuti ndinozviona izvozvo KDE Edu Mumusoro uyu wekushandisa zvekudzidzisa, unoenda nhanho imwe kumberi. Pamwe dai ivo vakashandisa XFCE ku Edubuntu mhedzisiro iri nani inowanikwa.
Kune rimwe divi tinaro UbuntuStudio, kuti kubvira paakatanga yake dauka Inowira murudo pakutanga kuona uye inoratidza kuti ichi chigadzirwa chiri nani. Kuita kushandisa XFCE, inozadzikisa kuti mushandisi ane chishandiso chiri nyore uye chiri nyore kushandisa chebasa rezuva nezuva, kunyange hazvo zvirizvo, kune zvimwe zvinhu zvandinoona zvichifanira kuvandudza.
Kutanga nechitarisiko chayo. Ivo vaifanira kunge vakatora sehwaro Xubuntu kuve nemusoro wenyanzvi uye unowirirana. Uye ndeyekuti nekutadza misoro senge BlueBird inosanganisirwa iyo inotaridzika zvirinani pane yakasarudzika sarudzo. Ngatitarisei pamienzaniso miviri:
Uye ndizvo izvo kunyangwe dingindira pacharo Greybird inosanganisirwa nekutadza. Bhuruu iri pamucheto pehwindo rinotaridzika zvakanyanya senge theme yehuwana yavakaisa Ubuntu Kylin, kugovera uko kwakagamuchirwa muChina.
Kune vamwe vese, isu tinowana yakanaka kwazvo desktop yekutarisa, ine rima madingindira uye kuve XFCE, kuitiswa kwayo kuri kukurumidza.
Chii chinozivisa kugoverwa uku kuwanda kwemapakeji anosanganisira ekushanda pamwe neAudio neVhidhiyo, akawanda zvekuti ndinotya kutaura kuti mapakeji ese aripo kubva kumatura eiri basa. Ehe, ivo vakanyatsorongeka mumenyu, saka tinovawana pasina zvinetswa zvinoenderana nezvatinofanira kuita.
Izvo zvisati zvajeka kwandiri, ndizvo zvaakaisirwa Nepomuk, kana zvirinani chishandiso chekuchenesa Nepomuk, uye senguva dzose (kwete kusiyanisa) pane zvakawanda zvekushandisa zve GNOME dzine dzimwe nzira dzakareruka mukati XFCE.
Kune vamwe vese ini ndinofanira kutaura kuti ini handina kuyedza kunyorera zvakanyanya, asi ini ndinofunga iine rakapamhama rakasiyana siyana maturusi eanenge ese marudzi ebasa. Naizvozvo, zviri kwauri kuti utarise kana zvichizadzisa zvaunoda kana kwete. 😉
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » UbuntuStudio uye Edubuntu: Vaviri vatorwa
Ubuntu Studio… Inotaridzika kunge inonakidza, sezvo ichigadziriswa multimedia, ndichaiongorora kuti ndione kana Steam inopinda.
Uye nenzira, ivo vakasarudza Nepomuk nekuda kwekugona kwayo kana zvasvika pakunongedzera mafaera nemaapplication (ini ndakaedza vamwe vavo veGTK uye chokwadi ndechekuti ivo vakaipa zvakanyanya). Ndinovimba Baloo iri muUbuntu Studio kutsiva Nepomuk
Zvakanaka, pakutanga kwenguva yakauya ne KDE seyakagadzika desktop. Zvinotaridza senge kubatirira kubva kare. Kunyangwe sekutaura kwavo, naKrita nekutsamira kwake, pamwe zvinonzwisisika. (Ndinovimba kuti ne kde5 haufanire kuisa KDE midhiya kuti ushandise zvavanoshandisa)
Pindura kuna Gallux
Unogona kuyedza Kudzokorora, zvakanyanyisa kurema kupfuura Nepomuk, uye ichingoshanda seichi.
Iyo ine nepomuk nekuti kde inochida sekutendeseka kwechero ipi yekushandisa, senge krita iyo inosanganisirwa mune ino suite
Pindura kuna cesasol
Ini handisi nyanzvi yemifananidzo, uye odhiyo, chokwadi ndechekuti kana. Ini ndinoda kutamba kugadzira yangu yega odhiyo odhiyo uye UbuntuStudio lagged zvishoma kumashure kwangu. Ini ndichafanirwa kuzviona mumuchina chaiwo, asi kuma studio enzwi ndinofunga kune dzimwe nzira mbiri dzakakodzera senge AVLinux, yakavakirwa paDebian Stable + XFCE, uye Kxstudio, iyo kunyangwe iri ubuntu + kde, yatogadzirirwa iyo musoro wenyaya neKxstudio repositori. Nenzira, zvinoita sekunge vanoenda kuDebian.
Pindura kuna AGR
Handifunge "kusazivikanwa" chinhu chakanaka, nekuti nharaunda dzeLinux kwandinogara dzinoshandiswa, pano pane zvikoro zvinoverengeka zvakaitwa edubuntu mumarabhoritari avo.
Valente Espinosa akadaro
Uye ini ndoda kujekesa kuti Ubuntu Studio ine chaiyo nguva kernel pamwe nezvakanakira iyo yainopa mune yehunyanzvi odhiyo yekugadzira.
Pindura Valente Espinosa
Chii ichi "realtime kernel" chinhu nezve? chinoshanda sei? Ndatenda.
Manu R. akadaro
Yakadzika latency musimboti, ine preemptive multitasking, ine inokurumidza kuita nguva pamutengo wekudzikira kuita. Izvo zvinobatsira semuenzaniso patinenge tichishandisa MIDI keyboard uye tinoda kiyi yega yega kurira nekukasira, zvisinei nemamwe mabasa ari kukanganiswa.
Pindura kuna Manu R.
Alexander Malaver akadaro
Ini parizvino ndinoshandisa Ubuntu Studio, zvinoita kwandiri kunge rakadzikama vhezheni uye rakanakira odhiyo uye vhidhiyo kugadzirisa uye kugadzira, zvisinei, vhezheni itsva yeOS yakaburitswa nguva pfupi yadarika uye ndanga ndine matambudziko ekugona kuita iyo yekuvandudza pasina kudzorera.
Kana chero mumwe wenyu akashanda pamwe neni panenyaya iyi, ndinogona kunge ndichifara chose, munotoziva kuti hazvina kugadzikana kugara neshanduro isingachatsigirwi uye yaunofanira kugadzirisa zvese manyore.
Pindura kuna Alejandro Malaver
Ini ndaivaziva, asi sei iwe usina kuziva kuti KX Studio - zvakare yakavakirwa paUbuntu kusvika iyo inotevera edition ichave debian - yadzinga Ubuntu Studio seyakanakisa AV distro, ingangoita yakanyanya kushandiswa?
Ini ndaisaziva O_O
Jose GDF akadaro
Mukuwedzera kune kxstudio se distro, pane sarudzo yekuisa maapplication ako muUbuntu, Mint kana zvimwe. Kwandiri, kunyanya, iwe wakangondipa mufaro, nekuti ini ndinowanzo shandisa LMDE, uye izvi zvinoreva kuti hazvizove zvakaoma kwandiri kuti ndimise studio yangu yekumba pane ino distro. Ichokwadi ndechekuti ini ndaneta zvishoma nekutangazve kushandisa yakasarudzika odhiyo yekuparadzira, ini ndoda kugona kuita zvese munzvimbo imwechete, pasina kutangazve.
Kana iwe ukaedza kxstudio, usarega kuvhura Claudia kunyangwe kamwe chete. Icho chibatsiro kune mimhanzi yekugadzira kufambiswa kwebasa muGNU / Linux.
Pindura José GDF
Nepomuk inogara ichiuya pamberi pechinhu chidiki diki chaunoisa. SaKrusader kana izvozvo.
UbuntuStudio ine Ardor3 yakaiswa nekusingaperi?
Kana yatove pre-kuiswa.
Edza iyi vhezheni yeUbuntu kwandiri imwe yeakanakisa kana iwe uchinge wakatarisana nenyika yakakura ye multimedia (odhiyo, vhidhiyo, dhizaini edhisheni); Ndanga ndichizvishandisa kwerinenge gore izvozvi uye chokwadi ndechekuti handizvidemba kuti ndakachiisa, muchidimbu: runako uye kusimba senge 🙂
Ndibatsireiwo ndapota, pese pandinoedza kutanga ubuntu studio yakajeka vervet ndinofanirwa kuzviita kakawanda, semuenzaniso gumi kana gumi nemashanu uye ndichishandisa nzira dzekudzoreredza. Izvo ndezvekuti hapana nzira yekugadzirisa bhuti uye kuchenesa shanduro dzekare .update-tora autoremove haishande
Mangwanani akanaka, ndauya pano nemusoro wenyaya uye ndichitsvaga ruzivo nezve Edubuntu, zvisinei hazvo chinyorwa chose chiri maererano neUbuntuStudio, saka zvinoita kwandiri kuti hazvina basa kutaura kumwe kugovera kana kusiri kuzokurukurwa mukuwedzera. kungoisa mitsara mishoma yekumushora.
Kugoverwa kweLinux yega yega kwakanangana nemushandisi zvinoenderana nezvavanoda uye ini handioni hukama uhwo Edubuntu naUbuntuStudio vanazvo, yega yega ine chinangwa chayo uye mashandiro, mune iyo UbuntuStudio ine multimedia, graphic dhizaini uye mafoto mafomu, inova izvo zvakaitirwa. izvo zvakagadzirwa uye zvisina kana kufananidzwa neEdubuntu kunova kuri kugoverwa kwezvinangwa zvedzidzo zvakazvimiririra nharaunda yavanoshandisa, saka mumaonero angu zvaifanira kunge zvakatsanangurwa zvakanyanya nezve KDE EDU, pane kungotaura nezve Edubuntu ne zita raifanira kunge raive »UbuntuStudio uye KDE Edu: ……… ..».
Pindura kuna Ober
Inowanikwa Iyo Yekutanga Hacker # 5
Ranwhen: histograms ye system chiitiko pane yako terminal